Fandresena Miezinezina Tsy Nampoizina Ho An’ny Antoko Eo Amin’ny Fitondràna Any Singaporo · Global Voices teny Malagasy
Fandresena Miezinezina Tsy Nampoizina Ho An'ny Antoko Eo Amin'ny Fitondràna Any Singaporo
Voadika ny 18 Oktobra 2015 8:07 GMT
Ny Praiminisitr'i Singaporo Lee Hsien Loong miteny amin'ny vahoaka amin'ny fampielezankevitra. ” Miaraka aminao, ho anao ary ho an'i Singaporo” no teny fanevan'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Sary avy aminn'y pejy Facebook-n'ny Antokon'ny Hetsiky ny Vahoaka.
Nanjakan'ny Antoko Hetsiky ny Vahoaka (PAP), antoko eo amin'ny fitondrana, tamin'ny 70 isan-jaton'ny vato eo ho eo ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Singaporo, isa 10 eo ho eo no tombony tamin'ny fifidianana teo aloha tamin'ny 2011, nidika izany fa lavitry ny fitantanan'ny antoko tokana ny tetezamita ao amin'ilay tanàna-fanjakana.
Volana vitsivitsy taorian'ny nahafatesan'ny Praiministra voalohany tao amin'ny firenena, Lee Kuan Yew, no nanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka 2015 ary nambara avy hatrany taorian'ny fankalazana ilay jobily volamena manetriketrika izany. 10 andro fotsiny no faharetan'ny fotoanan'ny fampielezankevitra. Ankoatry ny PAP tompon-toerana dia nirotsaka an-tsehatra amin'ny fifaninanana ireo antoko politika valo hafa izay tsy mitovy kalitao sy halehibe. Io no fotoana voalohany izay niadiana ny seza ao amin'ny Parlemanta hatramin'ny 1963.
Nantenaina fa hanohy ny firehana izay nanomboka tamin'ny 2011, fony nahazo ny 60,1 isan-jaton'ny vaton'ny olona ny PAP, vokatra ratsy indrindra hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1959, ilay fifidianana. Ny antoko mpanohitra no nandrasana hahazo tombony, indrindra ny Antokon'ny Mpiasa— ilay hany antoko mpanohitra manana olona voafidy ho mpikambana ao amin'ny Parlemanta
Fa gaga ny ankamaroan'ny Singaporeana rehefa azon'ny antoko eo amin'ny fitondrana ny 69,86 isan-jaton'ny vato, satria isaky ny fari-pifidianana manerana ny nosy dia hita ny fanilihana mpanohitra. Very seza iray amin'ireo fito azony ny Antokon'ny Mpiasa ao amin'ny Parlemanta, na dia ifikirany aza ny seza dimy azony tamin'ny Solontenan'ny Vondron'ny Fari-pifidianana (GRC) any Aljunied tamin'ny fahazoana elanelam-bato latsaky ny iray isan-jato.
Nosingantsinganin'ireo mpitoraka bilaogy sy mpandalina sasany ny vokatry ny fifidianana mba hanazavàna misimisy kokoa ny antony nahazoan'ny PAP vato maro kokoa na dia teo aza ny fanantenana fa tsy hahazo toerana betsaka intsony izy.
Naverin'ilay mpitoraka bilaogy Alex Au indray niaraka tamin'ny famoahana ho fanta-bahoaka ny voka-pifidianana vaovao ny mety ho fiheverana ny fifidianana solombavam-bahoaka teo aloha :
Tsy maintsy vakiana toy ny hoe fifidianana fanoherana tsotra izao ny voka-pifidianana tamin'ny 2011, ao anatin'izany ireo voka-pifidianana fanoloan-toerana taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tezitra tamin-javatra kely fotsiny ny vahoaka, ary raha vao noraisin'ny fitondrana an-tànana tampoka ny fanamboarana ara-politika maromaro momba ireny olana fototra ireny dia nivadika ny mpifidy.
Noheverin'i Ghui, mpaneho hevitra iray ao amin'ny The Online Citizen (mponin'ny aterineto), fa ny fironana nankany amin'ny PAP dia noho ny tahotra ny hisian'ny ” fifidianana fanatika/adala” — ahitana ny firongatry ny mpanohana ny mpanohitra izay mety hitarika ny tsy fahafahan'ny PAP hanangana governemanta, mamela ny andraikitra ho amin'ny vondron'ny antoko mpanohitra tsy marim-pototra :
Nohamafisin'ny PAP…. ny loza mitatao amin'ny fandravan'ny mpanohitra an'i Singaporo, nampitahoriny fa hirodana manontolo io rafitra governemanta io, mpanao politika tsy manana traikefa no voafidy ho ao amin'ny Parlemanta ary dia mety hitrosona amin'ny tany ny firenena.
Niaraka nanaiky ny olona izay noresahako fa ilainy ny Solombavambahoaka mpanohitra maromaro ao amin'ny Parlemanta. Maro ihany koa no nanaiky fa tsy ampy ho mpanara-maso mahomby ao amin'ny Parlemanta raha izay solombavambahoaka fito. Na izany aza maro ihany koa no natahotra fa raha tahaka izany daholo ny fomba fifidin'ny olona, mety ho very fihinanana ny PAP.
Notaterin'i E Lee, mpikambana iray ao amin'ny antoko mpanohitra iray tao amin'ny The Online Citizen ihany koa ny zavatra niainany tamin'ny fifidianana, amin'ny fanasongadinana ny olana nosedrain'ny antoko mpanohitra nanoloana ny herin'ny PAP :
Fantatra loatra ny fameran'ny haino aman-jery ôfisialy ny fampahafantarana sy ny sarin'ny antoko mpanohitra. Fa saingy tsy fantatry ny olona ny fomba fanaovany izany. Raiso, ohatra, ny zavatra niainako niaraka taminà mpanentana haino aman-jery iray ao an-toerana ka nanalàny ny filazàn'ny antokonay tsy ho ao amin'ny fahitalavitra nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Tahaka ilay olona izay nametraka ilay filazàna, dia niangaviana hijanona tao ambadika nandritra ny ora enina aho mandrapaha-azoko ny fahazoandàlana avy tamin'ny sampan-draharaha misahana ny lalàna ao amin-dry zareo. Tamin'io fotoana io, fehezanteny fohy efatra no mba notsipihan'ny solontenan-dry zareo tao amin'ny filazànay izay ahitàna anarana sy teny “mety manàla baraka”. Notadiaviko ny fanazavana ny antony mahatonga ireo teny ireo hoe manala baraka, saingy notsorin'ilay solontena tamiko fa tsy te-ho tompon'andraikitra amin'ny filazàna ataon'ny antoko ry zareo ary tiany ho dinihanay indray ny votoatin'ilay filazana.
Notsindrian'i Yeoh Lam Keong, mpahay toekarena lehibe tao amin'ny iray amin'ireo fikambanana mpampiasa vola any Singaporo ireo olana sedrain'ny antoko mpanohitra :
…misy sakana henjana amin'ny fidirana amin'ny fifaninanana ara-politika mahomby. Ny famaritana indray ny faritra politika, ny fanamafisan'ny ministera ny GRC, ny fifehezan'ny govt ny haino aman-jerim-panjakana, ny fahafohezan'ny fotoanan'ny fampielezankevitra tsy misy dikany, ny fikambanana tsy miankina misahana ny asa fanasoavam-bahoaka ( raha tsy hilaza afa-tsy ireo) dia midika fa tena tsy mitovy ny sehatra ilalaovana aty am-panombohana ary ireo solombavambahoaka mahay dia miasa tahaka ny mpikambana ao amin'ny mpanohitra fa ireo malemilemy na ireo tsara sitrapo kosa dia amporisihana hamonjy ny antoko eo amin'ny fitondrana. Jereo fotsiny ny manodidina. Manomboka lefy ny fanomezana toerana araka ny fahaizana eo amin'ny politika, izay tsy tsara ho an'ny fitantanana maharitra.
Nolazain'ny Praiminisitra Lee Hsien Loong fa tokony hisokatra hanomboka hiasa ny parlemanta vaovao amin'ny volana Janoary.
18 ora izayJapana